Maitiro Ekugadzirisa Ako Ekushambadzira Workflows Ekuwedzera Kwechigadzirwa | Martech Zone
Maitiro Ekugadzirisa Ako Ekushambadzira Workflows Yekuwedzera Kwechigadzirwa
Chipiri, Gunyana 27, 2016 Chipiri, Gunyana 27, 2016 Ashley Walsh
Uri kurwira kusimudzira kugadzirwa pane rako bhizinesi? Kana zvakadaro, hausi wega. ServiceNow yakashuma kuti mamaneja nhasi vari kushandisa zvakati 40 muzana yevhiki yebasa pamabasa ekutungamira-zvichireva kuti vangori neinopfuura hafu yevhiki yekutarisa pane rakakosha basa rehurongwa.
Nhau dzakanaka ndedzekuti pane mhinduro: workflow automation. Makumi masere nevatanhatu muzana mamaneja anotenda otomatiki mashandiro ebasa angawedzera kugadzirwa kwavo. Uye 55 muzana yevashandi vari kufara nezve tarisiro ye otomatiki masisitimu anotsiva anodzokorora basa.
Kana iwe uchida kusvetuka yako yekushambadzira otomatiki zano, funga kutora akasiyana-siyana epamhepo fomu mhinduro. Mafomu epamhepo chishandiso chakakura chekugadzirisa mashandisiro edhijitari, uye vanogona kubatsira dhipatimendi rese mukambani yako kubvisa mabasa anonetesa kubva pakufamba kwebasa.
Makambani ekushambadzira anogona kunyanya kubatsirwa nekushandisa online fomu tekinoroji kugadzira zvakagadziriswa maitiro. Heano mashoma nzira dzakakosha mafomu epamhepo anogona kusimudzira kushambadzira mafashama ekuwedzera kugadzirwa:
# 1: Sevha Nguva paBranded Fomu Dhizaini
Kushambadzira chikamu chakakura chekushambadzira. Zvese izvo dhipatimendi rekushambadzira rinoisa pamberi pevatengi- kusanganisira mafomu epamhepo - zvinofanirwa kuenderana nekutaridzika kwechiratidzo chako uye nekunzwa. Asi kugadzira fomu yakamisikidzwa kubva pakutanga inogona kunge iri nguva hombe yekuyamwa.
kupinda online fomu anovaka.
Yepamhepo fomu chishandiso inogona kubatsira yako yekushambadzira dhipatimendi nekukurumidza kugadzira uye kuburitsa yakashambadzirwa mafomu kuti utore zvimwe zvinotungamira. Yakavakirwa-mukati dhizaini mashandiro inobvumira timu yako kumisikidza mafomu mavara uye mafonti uye kurodha marogo asina ruzivo rwekunyora! Iwe unogona kunyatso sanganisira emafomu epamhepo pawebhusaiti yako nyore.
Unoda humbowo izvi zvinoshanda? Izvo zviri nyore zvekumakisa kugona uye mafomu akasimbwa anopihwa kuburikidza neye online fomu anovaka akabatsira imwe yunivhesiti kuwedzera kembasi kushanya ne45 muzana uye kwakasimudzira kunyoresa ne70 muzana mumakore maviri chete.
# 2: Kurumidza uye Nyore Unganidza Anotungamira Anotungamira
Kuunganidza zvinotungamira zvebhizimusi ndiyo inonyanya kukoshesa madhipatimendi mazhinji ekutengesa. Uye kushandisa online fomu muvaki kuita otomatiki kuunganidzwa maitiro anogona kushanda zvakanyanya.
Ne online fomu chishandiso, vatengesi vanogona kugadzira mafomu ekunyoresa zviitiko, mafomu ekuonana, kuongorora kwevatengi, zvemukati kurodha mafomu, uye zvimwe kuitira nyore kutungamira kuunganidzwa. Ivo vanogona zvakare kushandisa form analytics maficha ekutsvaga angangoita mabhodhoro mune fomu uye nekukurumidza kugadzirisa kuitira kusimudzira mwero wekushandurwa.
One digital kushambadzira agency isa izvi kuyedza nekambani yezvekurapa uye ikabatsira mutengi kuunganidza nekugadzirisa 1,100 kusaina kumusoro kwenyika makumi mapfumbamwe mumazuva makumi matatu chete. Iyo agency zvakare yakawedzera mwero wekushandurwa kweyekusaina fomu ne90 muzana.
# 3: Gadzira Inowanikwa Yemahara Hub yeMutungamiri Dhata
Kana imwe nguva data yekutungamira yaunganidzwa, zvakakosha kuti vashambadzi (uye vekutengesa reps) vave nekuwana nyore kwazviri kuitira kuti vagone kuteedzera uye kuongorora mhando yemitungamire uye vateedzere pazvinenge zvichidikanwa. Iyo online fomu anovaka anogona kurerutsa maitiro aya.
Dhata yakaunganidzwa kuburikidza nemafomu epamhepo inogona kuchengetwa uye kutariswa mune yakarongeka, yakagovaniswa dhatabhesi, ichibvumira vashambadzi uye vekutengesa reps kuti vatarise uye vateedzere kusaina-kumusoro, kubvunza, uye zvinotungamira. Iyo data inogona zvakare kuendeswa otomatiki kune mamwe maturusi anoshandiswa nechikwata, senge email email yekushambadzira system kana mutengi wehukama maneja maneja.
Kujekesa kushambadzira kwako kufashukira kuburikidza neyakagadziriswa otomatiki kunogona kukanganisa simba mukugadzirwa kwedhipatimendi. Uchishandisa online fomu muvaki kukurumidza kugadzira mafomu emhando yekushongedzwa kwekutungamira uye kugadzirisa data mune inowanikwa dhatabhesi inogona kuchengetedza vashambadziri imwe nguva yakakomba. Uye kuwedzera kugadzirwa kwechikwata chako chekushambadzira inogona kuve nhanho yekutanga kugadzira inoshanda uye inobudirira mashandiro pane rako bhizinesi.
Tags: unganidza zvinotungamirafomu infographicformstackruzivo hublead dataonline fomu anovakaanokwanisa anotungamirawebhu fomu manhambamafomu ewebhu
ACTIVE Network uye Viralstyle: Vatori vechikamu Management uye Merchandising